မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Crocodile attack at Zoo (ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ)
Posted by mabaydar at 12:21 PM
Ha Ha Ha, So how about now? you ok? :D
4/01/2011 12:34 PM
Yes... Sure... I am fine right after that photo taken... haha... but people around there wear laughing at me... *_^
တော်တော်နောက်တဲ့မဗေဒါ.. အဟုတ်မှတ်လို့.. ဒီနေ့ဘာနေ့ဆိုတာလဲ မေ့နေတာ.. ခုမှသတိရတယ်..
4/01/2011 12:49 PM
Post အသစ်တင်တာတွေ့လို့ ဝမ်းသာအားရလာကြည့်တာ April Fool ဖြစ်နေတယ်။ ဟားဟား။ Anyway, it isanice joke...:D :D
4/01/2011 1:34 PM
အဟီး ဂယ်လားလို့ လန့်သွားတာ
ပျော်ရွင်စရာ ဧပရယ်ဖူးလ်ဒေးလေးပါ မမရေ...
Naughty sis ..
I thought it's real. :))
အောက်ဆုံးက မိကျောင်းဆွဲခံရတဲ့ပုံကို ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်တာ မဗေဒါအောက်မေ့လို့ စိတ်ပူသွားတယ်..
နောက်တော့မှ ဧပြီဖူလ်းတဲ့း)
4/01/2011 10:17 PM
4/02/2011 2:17 AM
အနောက်လွန်လို့ ဖင်ပဲ့သွားမှ ထိုင်မရဖြစ်နေမယ်နော
4/02/2011 10:39 PM
ရယ်လိုက်ရတာ ပုံကလဲ တူပါပေတယ် တကယ်လိုပဲ ဘာလို့မိကျောင်းက မဟုတ်တဲ့နေရာဆွဲရလဲ ခြေထောက်စို ဟုတ်တုတ်တုတ် ဟားဟား